USatya Nadella uqinisekisa ukuba Windows 10 ifakwe kwizixhobo ezizizigidi ezingama-500 | Iindaba zeGajethi
Kwezi ntsuku iMicrosoft Yakha ibanjelwe eSeattle, apho USatya Nadella, umphathi we-Microsoft yayijongene nokuyivula ngokunikezela ngedatha enomdla kwinani le 10 Windows. Inani kulindeleke ukuba libe lihle ngakumbi kwaye siyakhumbula ukuba injongo yenkampani esekwe eRedmond yayikukufikelela kufakelo lwe-1.000 lwenkqubo yalo entsha yokusebenza.
Ngelo xesha isoftware entsha ikho kwizixhobo ezizizigidi ezingama-500 (kubandakanya iidesktops, iilaptops, iipilisi kunye nenani elincinci leefowuni zeLumia). Eli nani liyothusa ngokuqinisekileyo, kodwa liyasilela kwinjongo ebekwe kungekudala nguSatya Nadella ngokwakhe.
Ukuba sijonga ngasemva, ngo-Septemba ophelileyo u-Microsoft wabhengeza eluphahleni ukuba bafikelele kufakelo lwezigidi ezingama-400, ezibagcina bekwindlela yokufezekisa iinjongo zabo. Nangona kunjalo, ngaphezulu kwesiqingatha sonyaka kamva, inani lofakelo alikhulanga njengoko bekulindelwe, lihleli kufakelo lwezigidi ezingama-500.
USatya Nadella akazange angene ukuvavanya idatha, kodwa kuya kucingelwa ukuba abayi konwaba kakhulu kwiMicrosoft, Kwaye kukuba kwiMicrosoft Yakha i-2015 baqinisekisile ukuba bazokufuna ukuzisa Windows 10 kwizixhobo ezizibhiliyoni enye ngo-2017 okanye ngo-2018. Okwangoku injongo ikude kakhulu kwaye ithetha ngokucacileyo ukuba Windows 10 ayinayo indaleko elindelwe phantse ngumntu wonke.
Ngaba ucinga ukuba iMicrosoft izakufezekisa injongo yokuba Windows 10 ifakwe kwizixhobo ezizonke ezi-1.000 ezigidi?. Sinike uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » USatya Nadella uyangqina ukuba Windows 10 ifakwe kwizixhobo ezizizigidi ezingama-500
I-United States inokuthintela ukungena kweekhompyuter, iikhonsoli kunye neetafile kwiindiza zayo ezivela eYurophu